Myat Shu - အထူးကဏ္ဍ
You are here : Myat Shu » Archives for အထူးကဏ္ဍ
Published By Myat Shu On Tuesday, March 31st 2015. Under မျက်ရှု, သတင်း, သုတ, အင်တာဗျူး, အထူးကဏ္ဍ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်း ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အခါ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သူတွေ အနေနဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ မျှတမှု ရှိရေးဟာ အရေးကြီးသလို၊ ဒီအချက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေကို အဆုံးအဖြတ် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လောလောဆယ် အခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသီတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ "မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ၊ အဓိကရုဏ်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်" ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, March 14th 2014. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ကိုဝင်းဦး ဆုံးတော့ သူ့အသက်က (၅၄) နှစ်ပဲ ရှိသေးတာတဲ့။ နေမယ်ဆိုရင် အများကြီး နေနိုင်သေးတဲ့ အရွယ်၊ နေရသေးရင်လည်း နေရသလောက် အနုပညာအလုပ်တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု လုပ်နေဦးမယ့်လူ။ ဒါကြောင့် လူရွယ်လူလတ် အရွယ်မှာ သေဆုံးရှာတဲ့ ကိုဝင်းဦးကို ထူးထူးလည်လည် နှမြောမိတယ်။ ကိုဝင်းဦးက အနုပညာမှာ အဘက်ဘက်က စုံတဲ့လူ၊ အစုံလည်း လုပ်ချင်သူ၊ လုပ်သလောက် လုပ်သမျှလည်း စွံတဲ့လူ၊ အနုပညာမှာ လောဘလည်း ကြီးသူပါ။ ကိုဝင်းဦးက သူ့အနုပညာဗီဇကို စာပေမှာ စပြီး ဖော်လှစ်တယ်။ ၀တ္ထုတို၊ ၀တ္ထုရှည်၊ ဆောင်းပါး ရေးပါတယ်။ ရေးတာတွေမှာ စာဖတ်ပရိသတ် စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှိတဲ့အထိ အောင်မြင်သူပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုဝင်းဦးက စာပေနယ်မှာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, February 5th 2014. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ, ဆောင်းပါး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် မောင်သုမနတို့မှာ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း အရင်းအချာများ ဖြစ်ကြပေသည်။ ကျောင်းနေဘက်ဟုဆိုရာ၌ ပုဆိုးကွင်းသိုင်းလျက် ဖင်မလုံ၊ ခေါင်းမလုံ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခုံညင်းထိုးခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်ပေ။ မြန်မာပြည်၌ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်သော အဓိပတိ ထိပ်သီးဧရာမ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီး၌ စာပေအတူသင်ကြား နေထိုင်ခဲ့ကြရာမှ သူနှင့် ကျွန်တော် ပူးပေါင်း၍ ထိုကျောင်းတော်ကြီးကို မီးရှို့ကာ (၁၉၃၆) ခု သပိတ်ကြီးအား လှုံ့ဆော်ပေါ်ပေါက်စေခဲ့သူများ ဖြစ်ကြပေသည်။ ကိုအောင်ဆန်းနှင့် ကျွန်တော် စတင်တွေ့ဆုံပုံကို ယနေ့တိုင် မှတ်မိပါသေးသည်။ ပဲခူးကျောင်းဆောင် အပေါ်ဆုံးထပ်ရှိ ကျွန်တော်၏ ၀မ်းကွဲအစ်ကို ကိုတင်ထွတ်၏ နေထိုင်ရာ လက်ထောက် အဆောင်မှူး အခန်းရှည်ကလေးအတွင်း တစ်ညသ၌ စကားပြောနေကြစဉ် ကိုအောင်ဆန်း ရုတ်တရက် ၀င်လာလေသည်။ ယောင်လည်လည် မချိုမချဉ် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, November 26th 2013. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ, အသိပေးခြင်း, နှစ်ပတ်လည် အမှတ်တရစကား
မြန်မာစာပေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ အကျိုးကျေးဇူးပြုရန် ဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မျက်ရှုအွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ယခုလာမည့် အမျိုးသားနေ့တွင် သုံးနှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်မှတ်ရရ ဆိုလျှင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ အမျိုးသားနေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အမျိုးသားနေ့ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းမှာ မျက်ရှု၏ ပထမဆုံးသော စာမူ ဖြစ်ပါ၏။ အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင် တည်ထောင်ရန် မျက်ရှုနှင့် ကျွန်တော် တိုင်ပင်စဉ်က နည်းပညာ အခက်အခဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတော်ပင် ရတက်ပွေခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြင်ပနိုင်ငံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ခဲယဉ်းနေချိန် ဖြစ်သဖြင့် နည်းပညာ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များမှာ ဧရာမ အခက်အခဲကြီး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, June 21st 2013. Under Myat Shu eZine, မျက်ရှု, အမှတ်တရ
mingalar07.blogspot.com အမည်သာ ကြားဖူးရုံရှိတဲ့ ရတနာနတ်မယ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖူးဖို့ဆိုတာ ကျွန်မ တစ်ခါမှ စိတ်မကူးဖူးပါဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့ စစချင်း လွဲပုံက ရတနာနတ်မယ်ကို အငြိမ့်မင်းသမီးလို့ ထင်ခဲ့တာပဲ။ လူတော်တော်များများအတွက် ဟားစရာဖြစ်လောက်အောင်ကို ကျွန်မဆိုတဲ့ ကျွန်မကလည်း အလွဲကြီးကို လွဲခဲ့တာပါ။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်က အိမ်နားက အဒေါ်ကြီးရဲ့ ထမီကို လှလိုက်တာလို့ ပြောတော့ ဒါ ရတနာနတ်မယ် အဆင်လေတဲ့။ ရတနာနတ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူတုန်းလို့ ကျွန်မစပ်စုတော့ “သြော် ညည်းနယ်အေ.. ရတနာနတ်မယ်ဆိုတာ မင်းသမီး။ ချောလိုက် လှလိုက်တာလည်း လွန်ပါရော။ စတိုင်လည်း ကျမှကျတဲ့၊ ချောလို့လှလို့။ အဲဒါကြောင့် (ဟိုတစ်ချိန်က) လူကြီးက သူ့ကို ယူလိုက်တာတဲ့”။ ကျွန်မလည်း ဘာမင်းသမီးဆိုတာ ... Continue Reading
သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား (ဆရာကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း)
Published By Myat Shu On Sunday, May 26th 2013. Under မျက်ရှု, အင်တာဗျူး
ဓာတ်ပုံ။ ။ ဆရာ(ဦး) ကိုလေး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ဒီနှစ် သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက် မန္တလေးကို ပြန်တော့ သင်္ကြန်အတက်နေ့မှာ ဘဘ(ဦး) ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ကို ဦးချကန်တော့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဘဘရဲ့ စာတွေ ပုံနှိပ်စာမျက်နှာတွေထက်မှာ မတွေ့ရတာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကျမှ ဘဘရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတချို့ကို ဂျာနယ်တွေမှာ ဖတ်ခွင့်ရလာပါတယ်။ အဲဒီနောက် တလောလေးကပဲ “မွန်းတည့်အမီ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး ထွက်လာပါရော။ ဘဘရဲ့ ကဗျာနဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ဖော်ပြနိုင်ခွင့် အတန်ကြာ ပျောက်ဆုံးနေပေမယ့် ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်)ဆိုတဲ့ ကလောင်ဟာ တန့်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ဘဘဟာ ခေတ်ကိုရော၊ စာပေလောကကိုရော မျက်ခြေမပြတ်ခဲ့သူမို့ ယနေ့ခေတ်သရုပ်ကို ထပ်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတဲ့ ကဗျာတွေ ... Continue Reading
သမိုင်းတန်ဘိုး (သားသို့ပေးစာ – ၁၄)
Published By Myat Shu On Thursday, May 2nd 2013. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
www.insightguides.com ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ ၁၆၊၂၊၂ဝ၁၃ နေ့က တောင်တွင်းကြီးမြို့ စာပေဟောပြောပွဲကို ဖေဖေ ရောက်ခဲ့တယ်သား။ ညပိုင်းကျမှ ဟောပြောပွဲက စမှာဆိုတော့ မနက်ပိုင်း အားနေကြတာနဲ့ အတူဟောပြောမယ့် ဆရာလင်းသိုက်ညွန့်ရယ်၊ ဖေဖေရယ်၊ ဒေသခံစာရေးဆရာ ဆရာရွှေအိမ်ကိုရယ် ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းကို သွားခဲ့ကြတယ်။ စာပေချစ်မြတ်နိုးသူ ကိုသိန်းဌေးဦးရဲ့ ကားကလေးနဲ့ပေါ့ကွယ်။ ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းဆိုတာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ပျူခေတ်ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားရာဒေသအဖြစ် သမိုင်းသုတေသီတွေ ရှာဖွေလေ့လာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ ပန်ထွာဘုရင်မကြီး၊ ရန်ပယ်ချောင်း၊စည်ကြီးစသဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သမိုင်းမြို့ဟောင်းကြီးဆိုတော့ ထင်ရှားလှတယ်။ စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ခဲ့၊ ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ မဟူရာမေတ္တာကို ရင်ခုန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေဟာ တောင်တွင်းကြီး ရောက်တာနဲ့ ဗိဿနိုးမှာခြေချချင်နေတော့တာပါပဲ သားရယ်။ တကယ်တမ်းလည်းရောက်ရော ဖေဖေ့မှာ ရင်မော ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေမိတော့တယ်။ မြို့ဟောင်းကို တူးဖော်ရာက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ... Continue Reading